Ku soo dhawow Workforce Robot-Salaysan The - Rule News
Ku soo dhawow Workforce Robot-Salaysan The
From waitstaff u daryeeli asaxaabta iyo cilmi sharci, mustaqbalka shaqaalaha mishiinka halkan waa. Laakiin halkaas oo in ka tago aadanuhu
Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Ku soo dhawow shaqaale robot-ku-saleysan ee: aad shaqo waxay noqon doontaa mid aad u iswada?” waxaa qoray Julia Carrie Wong ee San Francisco, waayo Observer The on Saturday 19 March 2016 14.24 UTC
"Waa sixir saafi ah,"Ballamo Eatsa.
At makhaayad horeysay San Francisco ee si buuxda iswada, cunto muuqan in cubbies galaas yar, kaliya 90 seconds ka dib markii macaamiisha dalban oo bixin on iPads derbi-dhajinta. Waa waayo-aragnimo yar aadanaha-a - waitstaff lahayn, khasnaji lahayn, ninna si aad u hesho si khalad ah oo aanay jirin cid geddoomo.
Sidoo kale trick qowladda a.
daqiiqad ka hor cuntada u muuqataa, shaashadda bandhigay arki-marayo in Lugbuur cubbies aadayo madow ee seconds yar marka aad u qabtaan hortiisa gacanta in aad cunto siiya.
Related: aad sharad lahayd dhanka ah aalado galmada? AI 'tagi karo nus ka mid ah dunida oo shaqo la'aan’
Eatsa ayaa weli ma gaari total qalabaynta. Shirkadda ayaa qirtay inay ka shaqeeyaan shaqaalaha jikada yar yar, iyo mid shaqaale joogtaa hore ee guriga, ka jawaabidda su'aalaha ku saabsan sida loo dalban iyo soo gebgabeeyay doodihii su'aalo ku saabsan waxa ka socda derbigii cubbies sixir ka dambeeya. ("Wax kasta oo aad ka fekeri,"Ayuu teases.)
Laakiin makhaayadda, oo la furay bishii August, waxaana uu hore u ballaadhiyey Los Angeles, waxay bixisaa bidhaamaysa dhab ah si degdeg ah u dhowaanin-, halkaas oo qaybaha oo dhan hawlaha mar gobolka gaarka ah ee dadka lagu dhakhso karo, jaban, iyo in ka badan kalsoonaan karo by mashiinada.
Mustaqbalka halkan waa, oo ninna ee shaqo waa amaan.
"Waxaan arki kartaa shaqo la'aanta baahsan bidhaamayaan sida kacaankii robotics qaadataa qaban,"Ayuu yiri Noel Sharkey, Walls professor ah robotics iyo sirdoonka macmal ah ee Jaamacadda Sheffield UK. Sharkey dhawaan bilaabay Foundation ee Robotics Responsible si ay nooga caawiyaan fogaada "khataraha bulshada iyo anshaxa kara" ka codsiga baahsan ee aalado goboleedka.
Waxaan arki karaa shaqo la'aanta baahsan bidhaamayaan sida kacaankii robotics qaadataa qaban
Ma jiraan wax gaar cusub oo ku saabsan digniinta Sharkey waxaa uga dhawaajiyeen oo ay. In 2013, culimada Oxford Carl Benedikt Frey iyo Michael A Osborne ka digay in ku dhowaad 47% wadarta shaqo US ahaa halis ugu computerization, in falanqayn in kaalinta 702 shaqooyinka ay suurtagalnimada in la ciribtiray.
suuqeeyaal, xisaabaadka, garsoorayaasha ciyaaraha, xoghayayaasha sharci, iyo khasnaji, ayaa lagu helay in ay ka mid ah ay u badan tahay in ay lumiyaan shaqadooda noqon, halka dhakhtarradu, macalimiinta dugsiga barbaarinta, qareenada, fanaaniinta, iyo wadaadada ayaa yara nabdoon.
In The Future of mihnada, daabacay 2015, qorayaasha Richard Susskind iyo wiilkiisa, Daniel Susskind, ku dooday in xitaa kuwa xirfadaha dhaqanka hoos u dhici doonto iyo in la badalay "nidaamka kordheysa awood u".
Qof macaamil ah wuxuu isticmaalayaa iPads ah in meel la iska bixinaya inuu si at Eatsa, makhaayad si buuxda iswada ee San Francisco. Sawir: Ramin Talaie for Observer ee
Susskinds The u baahan tahay mar dambe isticmaasho mustaqbalka kacsan. Xagaagii lasoo dhaafay qalab gargaar sharci loo yaqaan Ross la bilaabay, taas oo uu isticmaalaa kiimikaysan caqli super-computer IBM ayaa Watson si ay ula wareegaan shaqada cilmi sharci.
Ross Intelligence co-aasaha iyo agaasimaha Andrew Arruda doodaysaa in qalabka, taas oo u oofin karin shaqada in mar qaaday saacadood arrin ilbiriqsi, ma aha khatar ku ah shaqooyinka tan iyo shirkadaha waaweyn ee sharciga joojiyay biilasha saacado qaatay cilmi u dhicii Great. Waxa uu sidoo kale sheegay in Ross "kordhiyo helitaanka caddaaladda" lahaa by samaynta matalaad dhinaca sharciga ah oo dheeraad ah la heli karo ee 80% of Americans yaa ma awoodi karo.
Sidaas oo ay tahayna, Ross waxaa lagu samaynayaa shuqul in aadanuhu ayaa mar la bixiyo dollar ugu sareysa si ay u qabtaan.
Talaadada, ka Financial Times sidaana waxa falanqayn ay Deloitte in lagu ogaaday in UK waxay mar hore laga badiyay 31,000 shaqo ee waaxda sharci ah si qalabaynta, oo la saadaaliyey in kale 114,000 Shaqooyinka soo socda uu noqon doono.
Waxaa oo dhan ka dhacaya uu aad u gariiro. In 2013, professor injineernimada MIT John Leonard ayaa sheegay in MIT Technology Review in "aalado si fudud u badalay aadanuhu" ma dhici doonto in uu noolaa. "The taxi semi-goboleedka weli heysan doono darawalka ah,"Ayuu ku dooday. Maanta, baabuurta goboleedka Google ayaa u safray in ka badan 1 milyan oo mayl on jidadka dadweynaha, iyo tagaasida is-wadidda muuqdaan oo dhan, laakiin lama huraan.
Sharkey filaysaa in industry adeegga la gaar ahaan adag ku dhufan doono. Waxa uu ku qiyaastay in ay 2018 waxaa jiri doona 35 million aalado adeeg "shaqada".
cubbies Computerized at Eatsa, San Francisco. Sawir: Ramin Talaie for Observer ee
robot A bartending magacaabay "Monsieur"Horeba waa on suuqa. dukaanka A hardware ee San Jose, California waxay leedahay robot ah tafaariiqda associate magacaabay "badnaan."The silsilad salad bar UK rogrogto ayaa lagu soo waramayaa ku dhawaaqay bishan in laba warbaahinta ee London lahaydeen dhaansado is-adeeg halkii dhowr khasnaji,. On Thursday, Domino ee Australia bandhigay a robot bixinta pizza ee Brisbane.
Qaar ka mid ah shirkadaha u muuqdaan kuwo u nugul dhaleeceynta inay la iska qaato shaqooyinka dadka.
On Thursday, Bloomberg ayaa sheegay in Google waa iibinta Boston Dynamics, hindisa ee aalado frighteningly qaba in ay ka heleen 2013.
"Waxaa jira xiiso ka saxaafadeed ee casriga ah, laakiin waxaan sidoo kale laga bilaabo si ay u arkaan qaar ka mid ah threads xun oo ku saabsan waxa ay iyagoo argagaxsan, diyaar u ah inay qaataan shaqooyinka dadka ',"Qoray mid ka mid ah shaqaalaha Google in emails gudaha helay Bloomberg.
Micah Green, aasaasihii Maidbot, shirkad dhismaha aalado si aad u nadiifiso qol hotel, nuuxnuuxsaday, in "marxaladan" alaabta shirkadda ee waa "taageerada ee dheeraadka ah, ma bedeli "ee guriga ka.
abuurasho kale ka dhigi lafo ma ku saabsan ujeedooyinka shaqo-badalay ay.
Just yar miles ka Eatsa xawaaladaha kale San Francisco, Mashiinnada Hawl-wadeenada, waa dhismaha aalado in laga yaabaa inuu bedelo faaruqiyeen ka dambeeya daaha. In 2012, shirkadda soo baxay si buuxda si toos Mashiinka qaadashada hamburger, oo ay website faanaa in ay ku dul dhaqaaqaaba in saladh, ismaris, iyo "cuntooyin badan oo multi-qayb kale".
"Qalab Our aan loogu tala galay in la sameeyo shaqaalaha ku ool ah,"Co-aasaasaha Alexandros Vardakostas sheegay Xconomy. "Waxaa loogu tala galay in gebi ahaanba iyaga obviate."
Mabu, robot saaxiibka
In 2014, Stowe Boyd, a post-qof mustaqbalka ka is-tilmaamay, Tuuray gauntlet ah. "Su'aasha dhexe ee 2025 noqon doonaa: Maxay yihiin dadka adduunka ah oo aan u baahan tahay in ay shaqada, iyo meesha kaliya ee laga tirada badan yahay ah ayaa loo baahan yahay si uu u hago 'dhaqaalaha robot-ku-saleysan ee?' "Uu ka codsaday in warbixin Center Research Pew.
Jawaabta ee noocyada kala duwan ee hawlaha kuwa inta badan aan la bixin laga yaabaa in jiifsan: shaqada daryeelka dhaqan ahaan loo qoondeeyey haweenka. Computers iyo aalado laga yaabaa inay ka fiican tahay dadka ugu shaqada Buuggan, waraaqaha, iyo xataa macquulka ah, laakiinse iyagu ma ay dareemaan, oo mana ay damqadaan karaa.
ugu yaraan, ma run ahaantii.
Laakiin haddii Mabu noqon kartaa fiican isagoo aadanaha ka badan dadka awood, waxa ka hadhay noo?
In xafiiska qaybta hoose ee xaafadda Dogpatch San Francisco ee a, Dr Cory Kidd la dhiso robot ah oo shaqada kaliya ee waa in la dhiiri leh galay isbedel dabeecadda wanaagsan.
Mabu waa robot ah miiska laambad yimaa-kii touchpad a on iyada caloosha. Sida a "Saaxiib caafimaadka shakhsiga ah", iyadu waxaa loogu talagalay dadka bukaanka ah maaraynta cudurada raaga. Iyadoo indhaha cagaaran ballaaran oo maqaarka midab jaalle midab, ayay noqon kartaa mid ka mid ah dareenka shakhsi ee movie Pixar ku Inside Out. Oo dareen yihiin waxay tahay, maxaa dhan oo ku saabsan.
Waayo, robot ah, Mabu uusan wax gaar ahaan cajiib ah oo aan samayn. Waxay fariistaa miiska sariirta aad, tooso maalintii mar ama laba jeer si uu u qabto wada hadal iyada milkiilaha.
Cory Kidd, CEO iyo aasaasaha Catalia Caafimaadka, Sawirka la Mabu. Sawir: Ramin Talaie for Observer ee
sheekaysiga kuwa, loogu talagalay talooyin ka nafsiga dabeecadda iyo screenwriter hore ee Hollywood oo suurto gal ka dhigay by sirdoonka macmal ah taas oo ka caawisa Mabu qabsado shakhsiyadda qofka iyo danaha, waxaa loogu tala galay in "faa'iidaysato dhiirogelin bukaan-socodka u gaar ah" in la raaco qorshaha daaweynta ay.
Related: daryeelayaasha Robot oo loogu talagalay dadka waayeelka ah waa 'hab kale oo ka sii xun u dhimanaya'
Mabu waa xeelad dumar ah ee codka iyo muuqaalka, doorasho Kidd ayaa sheegay in ku saleysan tahay cilmi baaris in, stereotypically, "Haweenka waxaa loo arkaa taageero dheeraad ah iyo daryeelka".
Miyuu daryeel Mabu noo? Iyadu waa caag ah, laakiin markii Kidd iyada sheegayaa in uusan dareemin in weyn, ayay jawaab, "Tahay in aad siday wax badan oo ku saabsan garbahaaga,"Oo gambaysatay gesha tilmaam in looks sida damqasho.
Ha aan daryeelo Mabu? Kidd ayaa sheegay in markii uu iyada laga soo ururiyey bukaanka ka dib tijaabooyin, badan ayaa diiday. "Waxay ku yidhaahdeen, 'Waxay u eg tahay xubin ka mid ah qoyska.' "
Waxay ku siin karaan nooc ka mid ah qaar ka mid ah taageero niyadeed iyo mid nafsaani ah in aadanuhu laga yaabo ma awoodaan in ay si waxtar leh u noqon dhammayn. Bal qiyaas lamaanahaaga maalin kasta aad weydiinaya haddii aad qaadatay kiniin, ka dibna qiyaaso sida muddada ay sii joogi doono lammaanahaaga. (Tani waa sababta Kidd ayaa sheegay in, "Waxaan ma uu bedelay wax aadanaha. Anigu ma aan ka fikiri kartaa qofka noqon lahaa saaxiibkiisii ​​caafimaadka. ")
Waxaa laga yaabaa in kaliya dhalista iyo dhaqashada aadanaha oo cusub. Tani waa meesha Noel Sharkey khadka barbaro. In 2008, Sharkey daabacay The MSF anshaxa ee Robotics weriyey Science, warqad ah in uu isagu horumarinta "aalado ilmo-haynta" digay horeba ka dhacaya Japan iyo South Korea.
Sharkey ayaa sii waday in ay ka barato horumarka berrinkii aalado nanny, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah in mar hore ayaa la heli karaa, sida "Wargeyska Daryeelka Robot"Ka Company Electric Japan ee Nippon (NEC).
"Dhab ahaan baan u arkay istimaalka ee aalado in ilaalinta carruurta,"Sharkey ayaa sheegay in. "Laga soo bilaabo falanqeyn faahfaahsan ee suurtogal ah ee daryeelka muddada dheer carruurta by aalado our, waxaan ka filan karto tiro ka mid ah xanuunada lifaaqa daran in goosan kari lahaa musiibo ku bulshadeena. "
Waa dhan of our shaqo si looga hortago in.
Related: horey ayaa kuweyn in sirdoonka macmal ah oo dalbaday in set cusub oo anshaxa | Jason Millar
NASA ogaada koobnaan cunto for caaga ee Atmospher ...
Top 10 Movies in aad leedahay si Labo Watch
Apple oo ku dhawaaqday New iPhone SE
Sidee cir badbaadaan xiisado diblomaasiyadeed ee spac ...
29300	2 Qodobka, California, cyada iyo tourismHospitality, dhacdo managem, Features, Julia Carrie Wong, qaybta Main, MIT - Massachusetts Institute of Technology, Robots, San Francisco, Technology, Observer ayaa, US Tech, West Coast News, Work & xirfadaha, news World
← The 25 Jonglei Video Games of Time All Apple oo ku dhawaaqday New iPhone SE →